DFS oo ku dhawaaqday inaysan jirin malayshiya beeleed hor joogsan kara doorashada ay qabanayso.
“Muuqaalka maalmahaan lawareejinayay ee lagu sheegay Ciidamo kasoo horjeeda Doorashada waa been abuur aan Sal iyo raad lahayn. Muuqaalka la isticmaalay ma aha mid hadda laduubay Ciidamada ka muuqdana ma aha falaago” ayuu yiri Wasiir ku-xigeenka Warfaafinta Xukuumadda.
Sidoo kale Warbaahinta ayuu ugu baaqay in ay iska hubiyaan wararka ay qorayaan, xili warbaahinta qaarkood ay tebisay wararka sheegayay in Ciidamo loo diyaariyay ka hortega doorasho aan raali lagu aheyn inay ka dhacdo Muqdisho lagu soo bandhigay duleedka Caasimadda.
“Waxaan ugu naseexaynayaa Warbaahinta iyo Dadka wax faafiya in laga dhawrsado been abuurka nuucaan oo kale ah. Waa ku gaf Qaranka, waa ku gaf Ciidamada, waana ku gaf Shacabka Soomaaliyeed. Colaad hurintu ma aha dimuquraadiyad” ayuu raacsiiyay Qoraalkiisa Al-Cadaala.